Maxaa ka dhallanaya haddii la ansixiyo Axdiga ilaalinta Hanti dhaqameedka Xiliyadda Colaada? – Kalfadhi
Maxaa ka dhallanaya haddii la ansixiyo Axdiga ilaalinta Hanti dhaqameedka Xiliyadda Colaada?
Xildhibaan Godax Bare oo sidoo kale ah Wasiirka Waxbarashada xukuumadda Soomaaliya, ayaa dhammaadka todobaadkii hore, ka hor jeediyay Xildhibaannada Golaha Shacabka Akhrinta 1aad ee Axdiga ilalinta Hanti- Dhaqameedka Xiliyadda Colaada.
Waxaa uu wasiirku sheegay in uu xildhibaannada uu ka codsanayo kana rajeynayo in ay ansixiyaan, heshiiska iyo labo heshiis oo kale oo horay uu sheegay in uu u horgeeyay Baarlamaanka.
Haddii labada gole ee Baarlamaanka uu ansixyo Axdiga ilaalinta Hanti dhaqameedka Xiliyadda Colaada, waxaa ka dhallanaya in la sameeyo shuruuc ah, wakhtiga dagaallada lagu jiro haddii askari ka tirsan ciidanka uu geysto bur-burin, maxaa ciqaab ah oo lagu qaadayaa? Waa shuruuc u baahan in la dejiyo.
Sharcigan marka la ansixiyo waxaa uu u baahanyahay in la baahiyo, lanna oggeysiiyo dadka ku lugta yeellankara xaaladdaha dagaal. Hay’addaha qaabilsan axdiga, waxaa laga fili doonaa, in afar-sanno oo kasta in ay soo saaraan warbixin ku aadan waxa ay axdiga ka qabteen?
Waxyaabaha kasoo baxa axdiga cida fulin laheyd iyo qaabka loo fulin lahaa, ayaa sidoo kale loo baahanyahay in la cadeeyo.
Heshiiska uu Wasiirka Waxbarashada xukuumadda Soomaaliya, uu usoo gudbiyay Baarlamaanka kuma xusna taariikh ahaan inta dowladdood ee horay u ansixiyay, kuwa-aan-ansixinin iyagana maxaa ka hor-istaagay, sidaasi awgeed, waxaa Wasaaradda laga doonayaa in ay kusoo darto taariikhdaasi.
Guddoomiye Cabdi Xaashi oo Guddiga Maaliyadda Aqalka Sare ku-wareejiyay Hindise-Sharciyeedka Dakhliga Guud ee Dalka
Madaxweyne Deni oo Baarlamaanka ka baxay isagoo “xanaaqsan” kaddib markii Su’aallo la weydiiyay
Madaxweyne Deni oo Baarlamaanka ka baxay isagoo "xanaaqsan" kaddib markii Su’aallo la weydiiyay